ဓါးတွေကို ထိုင်မျှားမိတဲ့သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ဓါးတွေကို ထိုင်မျှားမိတဲ့သူ	2
Posted by Thint Aye Yeik on Nov 25, 2016 in My Dear Diary, Poetry |2comments
ဓါးနဲ့ ပစ်ပေါက်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ရှိလာလို့. . .
ဓါးနဲ့ပေါက်မယ့်သူတွေ မရှိအောင် နေထိုင်နည်းက. . .
ငါ့အတွက်တော့. . . သိပ်ခက်လွန်းတယ်လေ။
ဇီဇီ says: ငါးမျှားချိတ်တွေကို ငါးတပ်ပြီး မျှားပါ့လားးး
Log in to Reply	-1	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Thint Aye Yeik says: ငါးမြှားချိတ်တွေ မိလာရင်…. အိုးကပ်လေး နံနံပင်လေး အုပ်ပြီး ချက်စားရမှာလား